Ifowuni yabaphandi base-Afrika baseLwandle- i-AfricArXiv
E papashwe ngu USam Dupont on 6I Epreli 2021 6I Epreli 2021
Ukwakha amandla amaziko aseAfrika ekubekeni iliso kunye nophando malunga ne-asidi yeelwandle, ngokwenjenje sabelana ngomnxeba wokuthatha inxaxheba ngu Inethiwekhi ye-OA-Afrika ibhekiswe kubaphandi baselwandle baseAfrika.
UkuCaciswa koLwandle eAfrika (OA-Africa) yinethiwekhi ye-pan-Afrika ebizwe ngokukodwa ukulungelelanisa nokwazisa acidification ulwandle (OA) ulwazi kunye nophando e-Afrika. Imisebenzi yophando kwi-acidification yolwandle kunye noxinzelelo olunxulumene nelizwekazi lase-Afrika lukhula ngokukhawuleza ukuphendula kwimfuno ecacileyo yamanyathelo okunciphisa nokulungisa iimpembelelo ezibangelwa kukutshintsha kwemozulu kunye neenguqulelo zenkqubo yonke. I-OA-Afrika yenziwe ngoososayensi abanomdla wokuqhuba uphando malunga nokubeka esweni ulwandle kunye nokujonga e-Afrika kwaye bayinxalenye ebanzi Inethiwekhi yokujonga ukuQinisekiswa kweLwandlekazi kwiHlabathi
1. qinisekisa I-Afrika iyomelela kwaye iyazi izoyikiso ezinokubakho kunye neendlela zokunciphisa / zokuziqhelanisa ezikhoyo zokulwa i-asidi yeelwandle.
2. Ukuphuhlisa uthungelwano lwenzululwazi olusebenzisanayo ukubonelela (1) ngolwazi kwabo bachaphazelekayo kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo, (2) ukubonelela ngesikhokelo kunye nomkhombandlela (3) ukulungelelanisa imisebenzi enxulumene nophando lwe-OA kunye nokubeka iliso ukukhuthaza ukuqhubela phambili kwesayensi.
3. Ukuququzelela Intsebenziswano phakathi kwezazinzulu, abathathi-nxaxheba, kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo ukwakha ukuqonda kwezentlalo, zebhayoloji, kunye nefuthe lomzimba kunye nefuthe le-acidification yolwandle
Umthombo wesithombe: oa-africa.net/
Kule minyaka isixhenxe idlulileyo, siphuhlise inkqubo ekujoliswe kuyo yokwandisa amandla okwenza esweni i-acidification yolwandle kunye nophando kumazwe asaphuhlayo. Sibaleke malunga noqeqesho lwama-7, safikelela ngaphezulu kwe-20 zesayensi kwaye sanikezela ngezixhobo kumaziko amaninzi.
Ukuvavanywa kwamandla oLwandle
Iingcali ze-acidification yolwandle ziye zavelisa iphepha lemibuzo ukuchonga iimfuno kunye nokuyila iinzame zokwakha izakhono (izixhobo zokusebenza, uqeqesho). Olu lwazi luya kuba luncedo kuluntu lwaseAfrika lophando kwaye lukhokele amanyathelo ezizayo. Iziko ledatha elingaziwayo liya kwenziwa kwaye kwabelwane ngalo noluntu. Isishwankathelo siya kudityaniswa kwiphepha le-OA-Afrika elimhlophe elijolise kubenzi bomgaqo-nkqubo ukutsala izixhobo zophando nge-acidification yolwandle e-Afrika.
Ukuthatha inxaxheba, kuya kufuneka ube ungumsebenzi kwiziko lase-Afrika elisebenza kwinzululwazi yolwandle. Awudingi ukuba ube usebenza ngoku kwiprojekthi ye-acidification yolwandle. Olu vavanyo kukubonelela ngenkxaso ekujoliswe kuyo kumaziko nokwandisa amathuba abo okuqalisa ukubeka iliso kunye nophando malunga ne-acidification yolwandle kungekudala.
Nceda ugcwalise iphepha lemibuzo elilandelayo; Kuya kuthatha kuphela imizuzu eli-15-20:
Yiya kwiphepha lemibuzo
Ukusivumela ukuba sivavanye amandla ophando nge-acidification yolwandle kwilizwekazi liphela, nceda wabelane ngemibuzo kunye noogxa bakho.
Ukuba sele uphendulile kwiphepha langaphambili lemibuzo, nceda uphendule kwakhona uxele inkqubela phambili ngokuhamba kwexesha.
UGqirha Sam Dupont
Indawo ekugxilwe kuyo yokuxhobisa ngezakhono IZiko loLungelelwaniso lweLwandlekazi (I-OA-ICC)
Umhlohli oPhezulu kunye noNjingalwazi oManyeneyo, kwiDyunivesithi yaseGothenburg, eSweden
iindidi:	Ukwakhiwa kwamandlaUkudibana
tags: imo iyatshintshaUphando lwaselwandleUlwabiwo olwandleCinezela